कमरेड क्रान्तिकारी- विविधा - कान्तिपुर समाचार
उनी चिच्याए, ‘फेरि बन्दूक उठ्नेछ यो देशमा !’ कोही करायो, ‘बन्दूक होइन, पहिले आफ्नो सुरुवाल उठाउनोस् ।’
चैत्र ७, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
आफ्नै साथी र कार्यकर्ताले समेत छोड्दै गएपछि एक्लिएको कमरेड क्रान्तिकारी ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्ता आफैं आत्तिन थाल्यो र एक अपराहृन उसले घोषणा गर्‍यो, ‘देशलाई अर्को क्रान्ति चाहिएको छ । म दुई–चार वर्षका लागि शहर छोडेर गाउँ पस्छु र दोस्रो क्रान्ति सम्पन्न गर्छु ।’
ऊ महान क्रान्तिकारी थियो । जनताको शिकार गर्नुलाई क्रान्ति मान्थ्यो, जातीय द्वन्द्वलाई अग्रगमन भन्थ्यो र धर्म–संस्कृतिको बेमाखलाई प्रगतिशीलता । व्यक्तित्व अनौठो थियो— मानिस उसलाई नचिनुन्जेल उसका साथमा हुन्थे र चिनेपछि साथ छोड्थे । केही वर्ष अघि देशभर ठूलो ‘क्रान्ति’ गरेर ऊ सत्तामा रजगज गर्न पुगेको थियो । दुर्भाग्य, अब उसलाई सबैले चिनिसकेका थिए ।
सूर्य डुबेपछि ‘आज मलाई कसैले डिस्टर्ब नगर्नू’ भन्ने उर्दी जारी गरेर ऊ भुटेको काजु र मिर्गको सुकुटीका साथ ‘ब्लू लेबल’ को बोतल खोलेर बस्यो र तरल पदार्थसँगै दोस्रो क्रान्तिको ठोस चिन्तनमा लीन भयो । राति अबेर नोकर खाना लिएर आउँदा सोफामा टाउको अड्याएर हल्का घुरघुर आवाजका साथ विचारमग्न देखिएको थियो । बिहान घाम झुल्कनु अगावै उठ्यो र चारजना विश्वासिला अंगरक्षकका साथ शहर छोड्यो ।
अर्को दिन उनीहरू चारैतिर पहाडले घेरिएको एउटा गाउँमा पुगे, जहाँ ऊ पहिलो क्रान्तिमा एक महीना भूमिगत भएर बसेको थियो । छेउमा जंगल थियो, जंगल पछाडि अजंगको पहरो । गाउँमा सडक पुगेको थिएन, पानी र बिजुलीको सुविधा थिएन । स्वास्थ्य चौकी र स्कूल भवन उसैवेला उसले बम हानेर खण्डहर बनाइदिएको थियो, जसको पुनर्निर्माण भएको थिएन । गरीब गाउँलेहरू गौप्राणी थिए— जति ज्यादती गर्दा पनि केही नबोल्ने । उसलाई लाग्यो— दोस्रो क्रान्ति शुरू गर्न यो हरेक दृष्टिले उपयुक्त ठाउँ हो ।
लुखुरलुखुर गाउँ छिर्दै गरेको महान क्रान्तिकारीलाई देखेर गाउँपालिका अध्यक्ष छक्क पर्‍यो । त्यो तिनै साहूको छोरो थियो, जसको घरको बुइँगलमा ऊ भूमिगत भएको थियो । ऊसँग हात मिलाउँदै अध्यक्षले सोध्यो, ‘हेलिकप्टरमा उड्ने मान्छे पैदल कसरी, कमरेड ?’
‘पहिलो क्रान्ति खेर गयो । अब दोस्रो क्रान्ति गर्नुपर्ने भयो । यहींबाट शुरू गरौं भनेर आएको,’ कमरेडले भन्यो, ‘यसमा तपाईंले सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’
‘ए, त्यसो पो ? फेरि क्रान्ति गर्ने ?’ साहूको छोरो मुस्कुरायो, ‘भइहाल्छ नि !’
कमरेडलाई आफ्नो घरमा पुर्‍याएर खातिरदारी गरेपछि उसले सोध्यो, ‘ल भन्नोस् मैले के गर्नुपर्‍यो ?’
‘क्रान्ति गर्न भूमिगत हुनुपर्छ । जंगल छँदैछ, म त्यहीं भूमिगत हुन्छु,’ कमरेडले आफ्नो योजना सुनायो,
‘तपाईंले गाउँका युवा–युवती पठाइदिनुपर्छ । म भूमिगत सेना तयार पार्छु ।’
‘भूमिगत हुन त म व्यवस्था मिलाइदिउँला, तर गाउँमा युवा–युवती नै छैनन्, कहाँबाट पठाउनु ?’ अध्यक्षले भन्यो, ‘युवक जति घरबारी बन्दक राखेर खाडी मुलुक हानिए, युवती जति पैसा कमाउन शहर पसेका छन् । गाउँमा केटाकेटी, बूढाबूढी र तपाईंको पहिलो क्रान्तिका घाइते, अपांग र गोली लागेकाहरू मात्र छन् । अरू गाउँको हालत पनि यस्तै हो ।’
‘ठीकै छ,’ कमरेडले सुस्केरा हाल्यो, ‘त्यसो भए केटाकेटीबाटै काम चलाउनुपर्ला ।’
‘बुढेसकालमा किन यत्रो दुःख गर्नुहुन्छ कमरेड ? आफ्नै पुराना लडाकूहरूलाई बोलाउनोस् न । नयाँलाई तालीम पनि तिनैले देलान्,’ अध्यक्षले सल्लाह दिन खोज्यो ।
‘तिनको कुरै नगर्नोस्,’ ऊ झस्कियो, ‘मलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा नै तिनीहरूबाट छ । तिनैबाट ज्यान जोगाउन अंगरक्षक लिएर हिंड्नुपरेको छ ।’
‘पैसा त छ नि, क्रान्तिका लागि ? कि पहिले जस्तै बन्दूक देखाएर चन्दा माग्ने हो ?’ व्यापारी बुद्धिको अध्यक्षले मुख्य जिज्ञासा प्रकट गर्‍यो ।
‘छ अलिअलि । चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ उसले आश्वस्त पार्‍यो ।
सरसल्लाह मिलेपछि कमरेड फेरि त्यही बुइँगलमा १५ दिनका लागि अर्धभूमिगत भयो । यसबीच अध्यक्षले उसका लागि जंगलमा खाल्डो खनेर एककोठे भूमिगत आवास तयार गरिदियो । बाहिरबाट हेर्दा ढलेको छाप्रो जस्तो, भित्र आरामदायी । कमरेडको निर्देशन बमोजिम सैनिक तालीमका लागि पिस्तोल, बन्दूक, बम, ग्रिनेड आदि निर्माण गरियो । सबै काठका । सुरुङ युद्धका निम्ति आठ हात लामा एक दर्जन सुरुङ खनियो । ठाउँठाउँमा पहिलो क्रान्तिका रक्तपातपूर्ण दृश्य देखाउने फ्ल्याक्स लगाइयो । जंगल पस्ने ठाउँमा गेट बनाइयो । विद्यार्थीहरूले स्कूलपछि दुई घण्टा जंगल पसेर क्रान्तिको खेल खेल्ने सर्वपक्षीय सहमति कायम गरियो ।
त्यसपछि जंगल पसेर कमरेड क्रान्तिकारीले आफूलाई भूमिगत र जंगललाई क्रान्तिको आधार क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । क्रान्तिको आभास दिलाउन पहिलो दिन उसका दुई अंगरक्षकले विद्यार्थीहरूलाई आँखामा पट्टी बाँधेर अपहरणको शैलीमा स्कूलबाट जंगल पुर्‍याए । टाउकामा रातो टालो बाँधिदिए र कमरेडलाई सलाम गर्न सिकाए । जंगल घुमाए, सुरुङमा छिराए र दालमोठ–चिउरा ख्वाएर विदा गरे ।
भोलिपल्टदेखि विद्यार्थीहरू आफैं हाजिर हुन थाले । कमरेड पिर्कामा उभिएर उनीहरूको सलाम खान्थ्यो । लाइन लगाएर पीटी खेलाउँथ्यो । बन्दूक बोकाएर मार्चपास गराउँथ्यो । चउरमा उभ्याएर भाषण सुनाउँथ्यो । तिनले ताली बजाएपछि झन् चर्को भाषण गर्न थाल्थ्यो । सुरुङमा लुक्ने तरीका बताउँथ्यो । दुश्मनलाई लखेट्न र परास्त गर्न सिकाउँथ्यो । सुराकी र गद्दारलाई चिनेर सजाय दिन लगाउँथ्यो । एम्बुस थाप्न सिकाउँथ्यो । बन्दूक तेर्स्याएर गोली हान्न लगाउँथ्यो । बम पड्काउन अह्राउँथ्यो । बम भनेर पटका पड्काइन्थ्यो ।
उसलाई त्यसको गन्ध असाध्यै मन पर्थ्यो । निकैवेर नाक गाडेर सुँघिरहन्थ्यो ।
विद्यार्थीहरू त्यो खेलमा छिटै अभ्यस्त भए । खोपी र डन्डीबियो भन्दा त्यो कहाँ कहाँ रोमाञ्चक थियो । उनीहरू आफैं लडाइँ खेल्थे । एउटाले ‘डुम्’ भन्दै गोली चलाएजस्तो गर्थ्यो र अर्को ‘ऐया’ भन्दै छाती थिचेर लड्थ्यो । कमरेड यो देखेर दंग पर्थ्यो । एक दिन उसले देख्यो, एउटा च्याँसे केटो बाबुको ज्वारीकोट र चश्मा लगाएर भाषण गर्दैछ र अरू श्रोता बनेका छन् । ऊ भन्दैछ, ‘देशले फेरि बलिदान मागेको छ । आऊ, आफ्नो बलिदान देऊ । तिम्रो बलिदानले मलाई माथि पुर्‍याउँछ । क्रान्ति भनेकै यही हो । बलिदान देऊ र क्रान्ति सफल पार ।’ उसको वैचारिक परिपक्वता देखेर कमरेड गद्गद भयो ।
अध्यक्षले सवारी साधनका रूपमा उसलाई एउटा खच्चड उपलब्ध गराएको थियो । ऊ त्यसैमा चढेर गाउँ डुल्थ्यो । गाउँलेहरू उसलाई ‘बाजे कमरेड’ भन्थे र ऊसँग डराएको अभिनय गर्थे । ‘बाजे त कति ठूलो क्रान्तिकारी, लास्टै डर लाग्छ नि’ भनिदिंदा ऊ दंग पर्थ्यो । कोही कोही ‘भात खाने हो बाजे ?’ भनेर बोलाउँथे । ऊ भोकै भए पनि मुन्टो बटारेर हिंड्थ्यो । भोलिपल्ट फेरि त्यहीं पुग्थ्यो र चर्को स्वरमा ‘भात पस्क’ भनेर आदेश दिन्थ्यो । क्रान्तिकारीले भात पनि अरूलाई थर्काएर मात्र खानुपर्छ भन्ने उसको प्रबल मान्यता थियो ।
सबै ठीकठाक चल्दैथियो । अचानक एउटा तनाव शुरू भयो । आफ्नो अथाह पैसा कमरेडले शहरमा व्यापारीहरूलाई राख्न दिएको थियो । क्रान्तिका लागि भूमिगत भएपछि आफ्ना अंगरक्षक पठाएर पैसा मगाउने गर्थ्यो । अकस्मात् उनीहरू फर्कन छोडे । एकपछि अर्को गर्दै चारै जना गायब भए । तिनलाई व्यापारीहरूले आफ्नै अंगरक्षक बनाइसकेछन् । यो खबर सुनेपछि उसलाई आफ्ना दुवै हात भाँचिएको अनुभव भयो । लेनदेनको लिखत थिएन । क्रान्ति सफल हुने टुंगो थिएन । अंगरक्षक विना शहर पुग्ने आँट थिएन । ऊ व्यापारीहरूले पैसा पचाइदिने भए भनेर छटपटिन थाल्यो ।
यसैबीच दोस्रो क्रान्तिको तयारी शुरू भएको थाहा पाएर पुलकित भएका कमरेडका वृद्ध गुरु एकदिन उसलाई भेट्न आइपुगे । उसले सैन्य तालीम लिइरहेका विद्यार्थीहरूसँगै उभिएर गुरुलाई सलाम अर्पण गर्‍यो ।
वर्षौंवर्षपछि त्यति धेरै बन्दूक एकसाथ देखेपछि वृद्ध गुरु जोशिए र देब्रे हातले मोटो चश्मा सम्हाल्दै दाहिने मुड्की जोडले आकाशतिर झट्कारेर चिच्याए, ‘स्याब्बास् ! फेरि बन्दूक उठ्नेछ यो देशमा !!’
जोश बढी भएछ क्यार, इँजार चुँडियो र उनको सुरुवाल तल खस्यो ।
कार्यक्रम हेरिरहेका गाउँलेहरू हाँस्न थाले । कोही करायो, ‘बन्दूक होइन, पहिले आफ्नो सुरुवाल उठाउनोस् ।’
उनी निहुरिन खोजे, तर सकेनन् । ढाडै सड्किएछ । कमरेडले हत्तपत्त अगाडि आएर सुरुवाल उठाइदियो र इँजार बाँधिदिंदै भन्यो, ‘बन्दूक त उठ्छ, उठ्छ । अरूले नउठाए मै उठाउँछु ।’
‘उठाउनोस् न कमरेड, त्यहीं पछाडि त छ नि,’ कसैले उक्सायो ।
उसले बन्दूक उठाएर देखायो । हाँसोको फोहोरा छुट्यो । कोही भन्दैथियो, ‘बन्दूक सुल्टो समाउन पनि बिर्सनुभो कि क्या हो कमरेड ?’
ऊ लाजले रातो भयो, र बन्दूकसँगै कुरा घुमायो, ‘बन्दूकको कुरा छोड्नोस्, अब हामी हाम्रा गुरुलाई बमको सलामी दिन्छौं । ल, बम पड्काऊ  !’
मानिस आतंकित भए । तर, बम भन्नु पटका थियो । एउटा विद्यार्थीले सलाई झ्यार्र पारेर आगो झोस्यो र पटका पड्कियो— ड्याम्म !
कमरेड क्रान्तिकारी झसंग भएर ब्युँझियो । यसो हेर्छ, ‘ब्लू लेबल’ को बोतल भर्खर भुइँमा खसेर चकनाचुर भएको छ, आफू सोफाको सोफामै !
उसले टाउको दायाँबायाँ झड्कार्‍यो र तीन–चार पटक लामो सास फेर्‍यो । सारा श्रीसम्पत्ति आफ्नै नियन्त्रणमा छ भनेर मन ढुक्क भएपछि एक्लै हाँस्न थाल्यो, ‘धन्न सपना रहेछ । नत्र बित्यासै परिसकेको !’
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ ०९:५२